သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘတွေကိုကန်တော့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းပညာပစ္စည်းများ… – SUNNY Tech News
သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘတွေကိုကန်တော့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းပညာပစ္စည်းများ…
Posted byDaxDo 2nd Nov 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorized
အရင်နှစ်တွေနဲ့မတူပဲ ဒီတစ်ခေါက်သီတင်းကျွတ်မှာ လူကြီးမိဘတွေကို ဘယ်လိုပစ္စည်း အသစ် အဆန်းလေးတွေနဲ့ ကန်တော့ရမလဲ?
မုန့်ပုံးတွေ၊ Ovaltine ပုလင်းတွေကနှစ်တိုင်းလိုလိုကန်တော့နေကျဆိုတော့ ဒီနှစ်မှာ
အပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်သွားအောင် လူကြီးမိဘတွေအတွက်လည်း တကယ်အသုံး၀င်မယ့်
1. Lock & Lock Eco Fryer
Eco Fryer ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်ပြီး အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမပါပဲ ချက်ပြုတ်တဲ့ စနစ်ဖြစ်ပြီး ဟင်းချက်တာအပြင် အသားငါး နဲ့ အသီးအရွက်တွေ ပြုတ်တာ၊ ပေါင်မုန့်ကင်တာ၊ အေးခဲနေတဲ့အသားငါးတွေကို အပူပေးတာစတဲ့ function တွေကိုလည်း ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေးလုပ်စရာမလိုပဲ ခလုတ်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ ချက်ပြုတ်ချိန်ကလည်း မိနစ်(၃၀)လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပြီး မီးခိုးငွေ့လည်း မထွက်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Eco Fryer နဲ့ချက်တဲ့ အစားအစာတွေက ပိုပြီးနူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ အရသာရှိတယ်ဆိုတော့ လူကြီးတွေအတွက် မဖြစ်မနေဝယ်ပေးသင့်ပါတယ်နော်။
Find LOCK & LOCK Eco Fryer with Best Deals on SUNNY eSTORE here.
2. Essager Bluetooth Speaker
မနက်ခင်းစောစောမှာ တရားဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့လည်နေ့ခင်းမှာနားရင်း တရားနာဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးမိဘတွေအတွက် သင့်တော်တဲ့ Bluetooth Speaker တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Wireless Bluetooth Speaker အမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာထားပြီး အိမ်အတွင်းဘက် နေရာအနှံ့ကနေ ကြားရမှာပါ။ TF card play, U disk, AUX playing mode တွေလည်းပါဝင်လို့ card ထဲကို တရားတွေ ထည့်ထားပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ရေစိုခံတဲ့အတွက် မတော်တဆရေစိုသွားရင်လည်း ပြဿနာမရှိပါဘူး။ Battery အနေနဲ့လည်း ကြာကြာခံတဲ့အတွက် လူကြီးတွေအတွက်အဆင်ပြေမယ့် သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။
Find best Bluetooth SpeakerS with Best Deals on SUNNY eSTORE here.
3. Remax Humidifier
ညဘက်အိပ်တဲ့အချိန် အခန်းထဲမှာ ရေငွေ့ထုတ်စက်လေးဖွင့်အိပ်မယ်ဆိုရင် အသက်အရွယ်အရဖြစ်ပေါ် တတ်တဲ့ အသားအရေခြောက်သွေ့ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အိပ်ရင်ဟောက်တတ် တဲ့သူတွေ အနေနဲ့လည်း အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်တာကိုလျော့စေတဲ့အပြင် ရာသီအကူးအပြောင်းမှာ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ နှာချေတာကိုလည်းသက်သာစေပါတယ်။ ဒီရေငွေ့ထုတ်စက်ရဲ့ထူးခြားချက်က ရေ၁လီတာဆန့်ပြီး အချိန် (၈) နာရီကြာအောင် အသုံးပြုနိုင်လို့ တစ်ညလုံးဖွင့်အိပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးတွေအတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အိမ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို စဉ်းစားနေရင် ဒါလေးကိုရွေးပါ။
Buy Remax Humidifiers with best deals on SUNNY eSTORE here.
4. Remax Mobile Phone Sterilizer
Remax ရဲ့ အရည်အသွေးမြင့် ဘက်စုံသုံး အိတ်ဆောင်ပိုးသတ်စက် ကတော့ ခုကာလမှာ
လူကြီးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုးသတ်မယ့်ပစ္စည်းကိုထည့်၊ အားသွင်းကြိုးတပ်၊ ခလုတ်နှိပ်ပြီး ၅မိနစ်ထားရုံနဲ့ 99.99% ပိုးမွှားတွေကို သေစေ နိုင်ပါတယ်။ ပိုးသတ်မယ့်အချိန်ကိုလည်း ၅ မိနစ်၊ ၁၀ မိနစ်စသည်ဖြင့် ရွေးလို့ရပါတယ်။ ပိုးသတ်စက်အဖုံးမှာ sensor ပါတဲ့အတွက် အဖုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့ UV မီးတွေအလိုလျောက်ပိတ်ပေးနိုင်လို့
မျက်စိထိခိုက်မှာမပူရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဥ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအလွယ်တကူ ပိုးသတ်ပေးနိုင်တဲ့ ပိုးသတ်စက်ကလည်း ခုလက်ရှိအခြေအနေမှာ လူကြီးမိဘတွေအတွက် သေချာပေါက်အသုံးတည့်မယ့် ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
Buy Remax Mobile Sterilizer with best deals on SUNNY eSTORE here.
5. Mi Band 4
Mi ရဲ့ Band4ကတော့ Design ဆန်းဆန်းနဲ့ လူကြီးတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် gadget တစ်ခုပါ။ AMOLED display နဲ့ဆိုတော့ screen ကိုကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ခြေလှမ်းအရေအတွက်၊ Calorie ပမာဏ ကိုဖော်ပြပေးပြီး အထိုင်များနေရင် လှုပ်ရှားဖို့အတွက် သတိပေးတဲ့ Idle Alert နဲ့ အလိုလျောက်နှလုံးခုန်နှုန်းတိုင်းတဲ့စနစ်လည်း ပါဝင်တော့ လူကြီးတွေအတွက် တကယ်သင့်တော်ပါတယ်။ တာဝေးပြေးတာ၊ တောင်တက်တာ၊ ရေကူးတာ စတဲ့ workout function တွေအပြင် ရေစိုခံစနစ်နဲ့တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ Feature တော်တော်များများပါဝင်တဲ့ MiBand4က လူကြီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အထောက်အကူပေးနိုင်မှာပါ။
Buy Mi Band4with best deals on SUNNY eSTORE here.
‘2020’ မှာ ဘယ် Smart Phone တွေက လတ်တလော လူကြိုက်အများဆုံး ဖြစ်နေလဲ?
ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Laptop တစ်လုံး၀ယ်ဖို့အတွက် ရွေးရခက်နေပြီလား?